ICanLocalize: Adikao tsara ny tranokalan'ny orinasanao hahatratrarana mpihaino vaovao | Martech Zone
Alarobia, Desambra 23, 2020 Alarobia, Desambra 23, 2020 Douglas Karr
Ny masoivohoko dia miasa manampy ny orinasa misy ifandraisany amin'ny fahasalamana amin'ny fiteny roa hananganana ny tranonkalany, manatsara azy io ho an'ny karoka, ary mampivelatra ny fifandraisana amin'ny marketing amin'ny mpanjifany. Na dia nanana tranokala WordPress mahafinaritra aza izy ireo, dia niankina tamin'ny olona nanangana azy io fandikan-teny amin'ny milina ho an'ireo mpitsidika miteny espaniola. Misy fanamby telo amin'ny fandikana ny milina amin'ilay tranonkala, na izany aza:
fitenim-paritra - Ny fandikana ny masinina Espaniola dia tsy nihevitra ny Meksikana fitenim-paritra an'ny mpitsidika azy.
voambolana - Tsy afaka mandray fitsaboana manokana ny fandikana ny masinina voambolana.
fombafomba - Ireo dikanteny, na dia tsara aza, dia tsy natiora resaka… tsy maintsy ilaina izany rehefa miresaka amin'ny mpihaino kendren'ity mpanjifa ity.
Mba handraisana ireo telo rehetra dia tsy maintsy nihoatra ny fandikan-teny tamin'ny milina izahay ary nanakarama serivisy fandikan-teny ho an'ilay tranonkala.
Serivisy fandikan-teny WPML WordPress
miaraka Plugin amin'ny fiteny maro WPML ary lohahevitra WordPress lehibe (Mibaribary) izay manohana azy, afaka namolavola sy namoaka ilay tranokala mora foana izahay avy eo ary nampiditra ny Sampan-draharahan'ny Fandikana ny WPML handika tanteraka ny tranokala amin'ny alàlan'ny fampiasana azy ICanLocalize ny serivisy fandikanteny tafiditra.
ICanLocalize Serivisy fandikana mifangaro
ICanLocalize manolotra serivisy fampidirana izay haingana, matihanina ary takatry. Manolotra mpandika teny 2,000 mahery voamarina sy miasa amin'ny fiteny 45 mahery izy ireo. Ny sarany dia ambany lavitra noho ireo masoivoho nentim-paharazana izay manaiky orinasa lehibe fotsiny na mitaky karazana fananganana kaonty manualy.
Amin'ny fampiasana ny Dashboard Fandikana WPML mifangaro amin'ny ICanLocalize, azonao atao ny misafidy entana ho an'ny fandikana ary manampy azy ireo amin'ny harona fandikan-teny. Ny fanisana ny teny sy ny vidiny dia refesina avy hatrany ary ampidirina amin'ny carte de crédit anao ao amin'ny kaontinao ICanLocalize. Nilaharana ireo fandikan-teny ary navoaka ho azy tao amin'ny tranonkalanao.
Ankoatry ny tranokala WordPress namboarina niaraka tamin'ny WPML, ICanLocalize dia afaka mandika antontan-taratasy birao, fisie PDF, rindrambaiko, fampiharana finday ary lahatsoratra fohy ihany koa.
Midira ho an'ny ICanLocalize
Fampahafantarana: Mampiasako ny rohy ifandraisako amin'i ICanLocalize.
Tags: fandikan-teny mora vidyincanlocalizefandikan-teny tafiditrafandikan-tenyserivisy fandikan-tenywordpress fiteny maroplugin WordPressfandikana wordpressserivisy fandikanteny wordpresswpml